Ny Bokin’ny Genesisy Toko 1, Andininy Voalohany, hatramin’ny Toko 2 , Andininy Fahatelo, no ahitana ny “Asam-pamoronana nataon’Andriamanitra”.
Voarakitra ao anatin’ireo Andininy maromaro ireo , ny “Fahariana Feno tsy nisy Banga” tanatin’ny “Fotoana Enina” . Izany “Asam-pamoronana” izany , dia natosiky ny Fitiavan’ Andriamanitra Manokana araka ny Fikasany Lehibe hatramin’ny Ela indrindra. Zava-mahagaga eo imasontsika ireny rehetra ireny .
Ny tena “Mahagaga sy Tampony” indrindra , dia ny “Olombelona Voalohany = Adama sy Eva” , no “Sangan’Asan’ Andria-manitra” . Mety hanontany tena ‘Ianao Ankizy sy Tanora hoe : “Fa tsy ny Olombelona Sangan’Asany ve no tokony ho nataon’Andriamanitra Voalohany” vao ireo fahariana samihafa rehetra ireo ? Rankizy ! Raha ny fihevitr’olombelona , dia tokony ho izany tokoa no izy . Raha mandinika ny “Mpanao Asan-tanana” tokoa mantsy isika , dia ilay “Asa nataony Voalohany” iny , no antsoina hoe “Sangan’Asa” , fa na mamerina manao toy iny endriny nataony teo aloha iny aza izy , dia tsy ho tafaveriny intsony iny vita iny , na amin’ny fomba inona na amin’ny fomba inona , fa tsy maintsy hisy zava-bitika kely hohitanao ihany rehefa mandinika izany lalina sy amim-paharetana ‘Ianareo Fa Etsy kely ange ‘Ianareo Rankizy ê!
Raha ny Olombelona no nataon’Andriamanitra voalohany Rankizy, dia “Tsy ho Tamàna” velively teo amin’ny toerana nametrahan’Andriamanitra azy izy ireo. Nahoana ? Mba ivereno vakina indray ireo Toko sy Andininy ao amin’ny Bokin’ny Genesisy nanombohantsika izao Bokikelintsika izao, dia ho tsapanareo tsara ny fahasamihafan’ny “Fihevitr’Andriamanitra” amin’ny “Lamin’ Asany” izay mifanohitra tanteraka amin’ny fihevitsika Olombelona ary . Ny mety amintsika dia ny hanekentsika amim-panetren-tena , fa “Tena Mahagaga Andriamanitra sy ny Asan’ny Tanany” !!!
Ndeha ary isika hiara-mamerina ireo Toko 1.1 – 2.3 , araka ireto Lisitra manaraka ireto :
·Ny “Tany” dia tsy nisy endrika sady foana (1.2).
·Ny “Aizina” no tambonin’ny lalina (1.2).
·Tsy mbola nisy ny “Mazava” (1.3)
·Andriamanitra no vao nampisy izany, ka nampisaraka ny “Mazava” sy ny “Aizina” (1.4).
·Toa babangoana ny nanodidina rehetra, vao izay no nanao ny “Habakabaka” Andriamanitra(1.6).
·Taorian’izay, no nampisiana ny “Rano” (1.7)
·Ireny ambaratonga ireny no nampisiana ny “Lanitra” (1.8)
·Dia niroso tamin’ny fitsinjarana tamin’ny Tany Andriamanitra, mba hisian’ny “Tany Maina” sy ny “Ranomasina” (1.9-10).
·Dia niroso tamin’ny andraikitra “Maha-Mpikarakara Zaridaina” Azy Andriamanitra, nanao ny “Ahitra” , “Anana Mamoa” (misy voa atao masomboly) , “Hazo Fihinam-boa” isan-karazany .(1.11-12) .
·Dia niroso teo amin’ny fandaminana hirindràn’ny “Mazava” hanazava amin’ny “Andro”, hiavahany amin’ny “Alina”(1.14-15) .
·Taorian’izay, no nanavaka endri-pahazavana roa lehibe Andriamanitra ,dia ny “Fana-
Zavana Lehibe ho Mpanapaka ny Andro” ary ny “Fanazavana Kely ho Mpanapaka ny Alina”. Ireo no “Hampisaraka ny Mazava sy ny Maizina” (1.15-18).
·Nitodika manokana tamin’ny “Rano” Andriamanitra , ka nandidy izany hanome : “Zava-manan-aina – Biby Vaventy – Manan-aina Mihetsiketsika , isan-karazany” (1.20-21).
·Namorona ny “Voro-manidina” rehetra hanidina ambonin’ny Tany sy eny amin’ny Habakabaka (1.20-21) .
·Nodidiany koa ny “Tany” hamoaka Biby madinika kely – Biby fiompy – Biby mandady – Biby mikisaka – Bibi-dia (1.24) .
Ary FARANY NY “OLONA” : Io ilay nantsointsika teo aloha kely teo hoe “SANGAN’ASAN’ANDRIAMANITRA” . Noforoniny tahaka ny “ENDRINY”(1.26-27)
Lehilahy = ‘Ish , sy Vehivavy = ‘Ishah , no namoronan’ Andriamanitra azy ireo
Eto Rankizy no voalohany isehoan ‘ ny “MIRA-LENTA” ao amin’ny Baiboly , izany hoe mitovy tanteraka ny “Lehilahy” sy ny “Vehivavy” , ka tsy misy “Ambony” sy “Ambany” satria “Fototeny Fototra Tokana” ihany no iraisan’izy roroa. Tsy misy Voambolana na iray aza eto
amin’Izao Tontolo Izao , ka “Fototeny Tokana” toy io nosoratantsika etsy aloha io ihany no iantsoana ny Lehilahy sy Vehivavy . Ohatra
Ø Amin’ny Malagasy dia io Lehilahy sy Vehivavy io ny azy = Mira “Tsy Mifandray” .
Ø Amin’ny Frantsay dia Homme sy Femme kosa ny azy = Mira “Tsy Mifandray” koa .
Ø Amin’ny Anglisy dia Man sy Woman ny an-dry zareo = Mira “Tsy Mifandray” , sns
Tamin’ny Nanatanterahan’Andriamanitra ireny Asam-pamoronana samihafa ireny, dia hitan’ Andriamanitra fa “Tena Tsara Indrindra” izy rehetra . Izany hoe : Tena Kanto – Tena Tonga Lafatra – Tsy Misy toa Azy - Tsy Manam-paharoa – Tsy Misy Hokianina – Manara-penitra .
Rankizy malala ! Miharihary amintsika tsara ary fa tena “Andriamanitry ny Zava-Kanto sy ny Fahatsarana Rehetra Andriamanitra” Tsy vitan’ny hoe :” Niteny fotsiny Izy” dia nisy izany , fa nisy “Fihosinkosenana” , tahaka ny ankizy madinika any Ambanivohitra , milalao Tanimanga, nanao kisarisarin’omby, na kisarisarin’olona . Tena nihosinkosina tokoa Rankizy Andriamanitra tamin’ny Namolavolany ny”Olona Voalohany”= Adama = Adamah ( Tany = Fotaka = Tanimanga ) sy Eva = Havah ( Aina = Fahavelomana = Fisian’Aina ) .Tena “Andriamanitra Mahagaga tokoa ny Andriamanitra Ivavahantsika” Rankizy !
Fa iverenantsika Rankizy ny amin’ ity “Nahariana Farany ny Olona” ka tsy maintsy “Nahatamana Azy Ireo” teo amin’ny toerana nametrahan’Andriamanitra azy honenany , dia izao :
·Vonona avokoa ny toerana nametrahan’Andriamanitra azy ireo.
·Nisy ny Rivotra Madio nahazoany niaina an-kalalahana , nisy Hafanana sy Hatsiaka .
·Nisy Karazan-java-maniry maitso sy nilenodenoka nanodidina ny fonenany .
·Nisy ny Karazan’Anana nanohanana azy tamin’ny fikarakarany ny Sakafony .
·Nisy Karazam-boninkazo namerovero sy tsara loko tetsy sy teroa nampifaly ny sainy .
·Nisy Voro-manidina – Karazam-biby neti-ho namany sy niarahany nisangy .
·Nisy Masoandro sy Hazavana , nahazoany niasa sy namokatra tamim-pifaliana .
·Nisy Alina nahazoany niala sasatra sy Tori-masom-piadanana nilamina tsara ..
·Nisy Rano Fisotro Madio sy mamy , azony nisotroana sy nidiovana ary nikarakarany ny sakafony . .
·Nisy Voankazo Fihinam-boa be Otrik’aina nangalany hohanina hamelomany ny vatany.
·Nisy Karazana Hazandrano azo nosaakàna hatao laoka sy sakafo koa.
·Nisy ny Voro-manidina samihafa nanidintsidina sy nisiontsioka teny rehetra teny .
·Nisy ireo Biby Vaventy sy Antonontonony fanao Fanatitra ho Fisaorana sy Fankasitrahana an’ Andriamanitra antom-pisiany taty aoriana , tamin’ireo Biby Madio , sns…sns…
Nisy daholo ny zavatra rehetra nanodidina azy mivady , ka niteraka” Fifaliana sy Fahafi-
naretana” ho azy, ary dia nilomano tao anatin’ny “Tena Fiadanana” izy .
“Tontolo Iainana” mahafinaritra teo ambany “Fitondrana sy Fikarakana ary Fanaraha-mason’Andriamanitra” no nisy ireo “Ray Aman-dReny Voalohany” ireo . Noho ny fisian’ ireo rehetra ireo ary , dia tsy tokony ho gaga amin’izay ‘Ianareo Rankizy , fa “Tena Tamàna” teo amin’ny toerana sy fonenana nametrahan’Andriamanitra azy tokoa izy , fa tsy toy izay nolazaintsika tary aloha kely hoe “Tsy Tamàna izy mivady” raha ilay “Tany Ngazana” – “Tany Foana” no nonenany arak’ireo hitantsika tamin’ny Toko 1.1-2 ireo . “Tamàna” ary izy izao , satria “Tontolo Iainana Tonga Lafatra” , “Ari-fomba” , no nametrahan’ Andriamanitra azy honenany .
Mba hahatonga anareo ho liana sy ho tia handinika ny “Baiboly”, fa tsy hionona fotsiny amin’izay aroso eto, dia iniana tsy hasiam-panazavana lava loatra , toy ny Fanao amin’ny Fandrafetana “Rakibolana”ireo “Voambolana” ireo ( Mariho Tsara fa : Ny”Rakibolana”, lava kokoa na lavabe ny Fanazavana isaky ny “Teny” tsirairay , fa ny “Voambolana” kosa dia fohy na teny vitsy ihany ny Fanazavana aminy . Tsy hanahirana anareo loatra ny “Voambolana” eto , satria saika hita eny rehetra eny , indrindra amin’ny manodidina ny fonenana misy anareo sy amin’ny toeran-kafa mety
andalovanareo ny maro amin’izy ireny . Ekena fa maro koa ireo Anarana tsy hitantsika , sady tsy misy eto amin’ny Nosintsika , fa ao amin’ny Baiboly irery ihany no ahitana azy . Misy aza ny sasany amin’izy ireny izayvoalaza ao anatin’ny Baiboly no tsy hita intsony satria “Lany Tamingana”, ka ny anarany no sisa vakiantsika ao amin’ny Boky Masina.
Ireo “Toko sy Andininy” ao amin’ny “Soratra Masina” no hasehontsika voalohany , dia manaraka avy eo ny anarana samihafa araka ny Abidia , vao hiroso amin’ny “Fanazavana Fohy” sady tsy lalina loatra fa tena tsotra no atolotra anareo isak’ ireny “Voambolana” ireny .
Manao izao Tsipy teny kely izao ihany aminareo Ankizy sy Tanora ny Tenako, fa ny “Voambolana” rehetra ho hitanareo manaraka eto, sy ireo “Toko” sy “Andininy” hovakinareo , dia noraisina avokoa tao amin’ny “Biboly Dikan-teny Protestanta” taloha .Marihina, fa tsy noraisina avy amin’ny “Dikanteny Iombonana” na “ Dikan-teny Protestanta“ vao nahitsy tsy ela loatra , na “Dikanteny hafa” tsy akory no “Anarana Samihafa” miseho ato . Na izany aza, dia azonareo atao tsara ny mamaky sy mandinika ireny “Dikanteny Samihafa” ireny , satria mifameno izy rehetra , ka hampanankarena ny fahalalanareo izany .
Dia ‘Ianareo mihitsy amin’izay no hamadibadika ireny Toko sy Andininy voasoratra ao ireny , ary hiezaka koa hikaroka fanampim-panazavana amin’ny Ray aman-dreninareo, ny Mpitondra Fivavahana samihafa any amin’ny Toerana misy anareo : Pastora FLM , Mpitandrina FJKM , Ray Am-panahy amin’ny EKAR sy ny EEM , ny Katekista , ny Mpampianatra Sekoly Alahady , ny Mpampianatra any amin’ny Sekoly ianaranareo , Ary amin’ny farany, dia ho tsapanareo ny voka-tsoa aterak’izany finiavana handalina ny Tenin’Andriamanitra izany , ka hitera-pifaliana lehibe ao anatinareo , ary dia ho gaga tokoa ‘Ianareo, fa hay ve ka kely dia kely no sisa tsy voavakinareo ny “Baiboly” Mahafinaritra ô !
Ny“Vombolana” narafitra manaraka eto, dia iangaviana anareo mba hanatona ny “Fikambanana Mampiely Baiboly Malagasy” akaiky anareo , mba hividy ny “Boky Konkordansa” Kanefa moa , raha mbola misy aza izy , dia tena lafobe tokoa . Ka aoka hividy ny “Konkordansa Nomerika” na “Elektronika” ‘Ianareo , fa moramora kokoa ny vidiny . Ny fanananareo izany dia hanampy anareo be dia be , sady hampanankarena ny fikarohana ataonareo manokana , avy amin’ireo Boky misy ny Toko sy Andininy ao amin’ny Baiboly mahakasika ny “Voambolana” tsirairay narafitra amin’ity Boky ity.
Ny “Boky” tsirairay ao amin’ ny Baiboly, ny “Toko” sy “Andininy” hovakina mantsy , dia “Santionany” ihany no aseho anareo eo amin’ny “ISA-TENY”, satria raha ireo rehetra mahakasika ny “Voambolana” tsirairay no ampidirina araka ny Karazany sy Sokajiny, dia havesatra be tokoa izany. Jereo ange ohatra , ny teny hoe : “AHITRA” fa miisa 85 , ny “BORIKY” miisa 133 , ary maro amin’ireo “Voambolana” hafa aza misy “Anjatony Telo na Efatra latsaka” . Betsaka loatra izany ! Ka dia iangaviana ary ‘Ianareo , sady mba ho fiaraha-miasantsika , ny hampiasa ny “Konkordansa” notsahiviko teo aloha teo fa “Fitaovana Lehibe” sy “Sarobidy” hanampy anareo tokoa izany , sady hahatonga anareo ho tia karokaroka ka ho faly hameno ireo santionany efa hitanareo sahady ireo , izay tsy tafiditra ato . Misaotra anareo , ary mahereza ê !
Mety ho gaga kely ihany koa ‘Ianareo, raha mahita “Voambolana “ roa na telo ato , izay samihafa ny fanoratra azy, nefa ny heviny dia iray ihany. Ohatra : Papelika sy Tsipoy ny Papango Mainty sy Voromahery ary ny Voronampihaza sy Voromahery , sns…sns… . Iray ihany no ambaran’ ireny, fa samihafa kosa ny nandikàn’ny Mpandika izany tany aloha . Niniana nampidirina ao anati-lisitra ihany anefa izy ireny , satria miseho ao anatin’ ny Baiboly , ka tsy tiantsika handalovana fotsiny .
Ary Farany : mety ho tojo anaran-java-maniry mitovy amin’ny anaran’olona ‘Ianareo, ka aoka tsy hampifangaroina ao an’eritreritrareo izany satria zava-misy ao amin’ny Baiboly . Ohatra ireto :
“LOTA” sy “ROTA” = Sady anaran’olona ireo no anaran-java-maniry koa . Maro amin’ny Malagasy koa no manome ny anaran-janany amin’ny anaran-java-maniry . Mahafinaritra izany !